Fikambanan’ny mpianatra kameroney: nitondra fanomezana ho an’ireo ankizy ao Befelatanana | NewsMada
Fikambanan’ny mpianatra kameroney: nitondra fanomezana ho an’ireo ankizy ao Befelatanana
Tsy manadino ny zaza malagasy marary sy tsy ampy sakafo ny Fikambanan’ny mpianatra kameroney eto Madagasikara (Asecam)*. Tonga teny amin’ny hopitaly Befelatanana izy ireo, ny 18 desambra teo, nitondra fanomezana ho an’ireo ankizy ireo, miampy zavatra ilaina andavanandro (PPN) ho an’ny ray aman-drenin’ireo zaza ireo, amin’izao ankatoky fetin’ny Krismasy izao.
Niray hina ireo mpianatra kameroney eto amintsika hampifaly ireo zaza marary sy tsy ampy sakafo ao amin’ny sampana fitsaboana ankizy, hopitaly Befelatanana. Rtoa Mailaka Ginette, filohan’ny fikambanan’ny mpianatra kameroney eto Madagasikara, ny nitarika ireo tanora kameroney, namangy ankizy maherin’ny 60 sy ny ray aman-drenin’izy ireo. Fanampiana nentin’izy ireo ny ronono, ny sakafon-jaza samihafa, ny vary, ny menaka, ny sira, ny tsaramaso, ny savony, sns.
« Fototra iray lehibe ilaina ny fahasalamana koa amin’izao fetin’ny Krismasy izao, fanirianay ny eo akaikin’ireo zaza ireo, hanampy azy hanao fety sambatra ho fankalazana ny nahaterahan’ny Mpamonjy, toy ny ankizy hafa rehetra. Tianay ireo ankizy ireo sy ny ray aman-dreniny hahatsiaro fa misy mpanohana sy manadino ny aretina mahazo azy », hoy Rtoa Mailaka Ginette.
Nahitana fitsikiana tamin’ireo ankizy sy ny fianakaviany ny fanentanana nifanaovan’ireo mpianatra vahiny ireo. Manambara ny fahavononan’izy ireo mitondra ny anjara birikiny ho an’ny fampandrosoana sosialy eto amin’ny firenena mandray azy izao fanehoana firaisankina izao. Manaporofo ihany koa ny fanomezana hasina ny maha olona.
Tsara ho fantatra fa nijoro hatramin’ny taona 1992 ny Fikambanan’ny mpianatra kameroney eto Madagasikara. Hatramin’izay taona maro izay, maro ireo fanampiana sosialy nentin’izy ireo ho an’ny mponina sahirana. Misy isan-taona ny fampisehoana ataon’izy ireo ho fampahafantarana bebe kokoa eto amintsika ny kolontsaina kameroney.